जान्नुहोस् ! यस्तो छ , एक सय वर्षकी आमा र ८२ वर्षका छोराको मार्मिक कहानी – MediaNP
जान्नुहोस् ! यस्तो छ , एक सय वर्षकी आमा र ८२ वर्षका छोराको मार्मिक कहानी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:३५0
काठमाडौँ । आमा आफैमा अमूल्य शब्द हो । चाहे जो कोही मानिस हुन उनीहरुको लागि आमा संसारकै सबैभन्दा महान हुन्छिन् । आफ्नो सन्तान जति नै ठूलो भएपनि जन्मदिने आमाबाबूको लागि छोराछोरी सानै हुन्छन् । बच्चा होस् या बूढो आमाले छोराछोरीलाई गर्ने माया सधै एकनास हुन्छ ।
यस्तै आज हामी तपाईहरुलाई १ सय वर्षकी आमा र ८२ वर्षिय छोराको मार्मिक कथा सुनाउन गइरहेका छौँ । बेलायतको लण्डनमा १ सय वर्षकी आमा र उनका एक ८२ वर्षिय छोरा एडा किटिंग बस्दै आएका छन् । सन् २०१६ मा पत्नीको मृत्युभएपछि एक्लो भएका एडाले लिभरपुलमा भएको वृद्धाश्रममा बस्ने फैसला गरेक थिए ।
तर छोराले वृद्धाश्रममा जाने फैसला गरेको सुनेपछि दिनदिनै मृत्युको मुखमा पुगेकी आमालाई निकै चिन्ता भयो । अब छोरालाई वृद्धाश्रममा कस्ले हेरचाह गर्ला भनेर चिन्तामा रहेकी आमा छोराको लागि उनी छोरासँगै वृद्धाश्रम गइन् । ३ वर्षदेखि सँगै रहेको यी आमाछोराको दिनभर साथै रहन्छन् । उनीहरु यो उमेरमा पनि हाँसखेल गरिरहेका हुन्छन् । रातमा छोरा सुतेपछि मात्रै आमा आफ्नो कोठामा सुत्न जान्छिन् । बिहानको खाजा आमाछोरा सँगै बसेर खान्छन् ।
आइपिएल फाइनलमा देखिएकी यी सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ! आखिर को हुन् उनी !